भिडियो कोलाबोरेसन प्लेटफर्महरू उद्योग भर्टिकलहरूमा - InstaVC Suite
InstaVC ले भिडियो सहयोग प्लेटफर्महरूको पूर्ण सुइट प्रदान गर्दछ
तपाईंको अद्वितीय मागहरू पूरा गर्न मद्दतको लागि उद्योग ठाडोहरू भर।
सम्पर्क बिक्री प्लेटफर्महरू अन्वेषण गर्नुहोस्
उच्च गुणस्तर र सुरक्षाको साथ उत्तम भिडियो सहयोग समाधान, निर्दोष र प्रयोग गर्न सजिलो भर्चुअल संचार प्लेटफर्महरूलाई सशक्त बनाउँदै।
HD भिडियो र अडियो बैठकहरू
HD भिडियो, अडियो स्पष्टताको साथ समावेशी, भिडियो-पहिलो बैठकहरू सिर्जना गर्नुहोस् र अन्तिम उत्पादक भर्चुअल बैठक अनुभव कार्यान्वयन गर्नुहोस्।
उच्च ग्रेड सुरक्षा
अति सुरक्षा र पारदर्शिता संग आफ्नो व्यापार बैठकहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। InstaVC, उच्च ग्रेड सुरक्षा प्रणालीहरू लागू गरेर शीर्ष-स्तर गोपनीयता सुनिश्चित गर्दछ।
सहज इन्टरफेसको साथ निर्बाध अन्तर्क्रिया गर्दै, तपाइँलाई जहाँबाट र कुनै पनि समयमा मात्र एक क्लिकमा सम्मेलन होस्ट गर्न सक्षम बनाउँछ।
कुनै पनि उपकरणमा काम गर्दछ
मोबाइल, ल्यापटप, ट्याबहरू र अन्य धेरै जस्ता कुनै पनि यन्त्रहरूमा निर्दोष रूपमा सुरक्षित भिडियो बैठकमा सामेल हुनुहोस्। कुनै पनि स्थापना बिना अनुभवको आनन्द लिनुहोस्।
InstaVC ले किफायती, नवीनता, र अनुकरणीय सहयोगको साथ कार्यहरूको विस्तृत श्रृंखला संयोजन गरेर, सजिलो सम्मेलन प्रदान गर्दछ।
InstaVC ले लागत-प्रभावी समाधानहरू प्रदान गर्दछ, तपाईंको अद्वितीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न र तपाईंका सबै मागहरू पूरा गर्न। हामीसँग तपाईंले आफ्नो अवस्थित बिलिङहरूमा धेरै बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रा सम्बद्ध साझेदारहरूले समाधानको विस्तृत दायरा, प्रभावशाली आयोगहरू, र बाटोको प्रत्येक चरणमा उत्कृष्ट समर्थनमा पहुँच पाउँछन्। यो नि: शुल्क छ, यो सजिलो छ, यो भुक्तान गर्दछ !!
सर्वश्रेष्ठ आयोग दरहरू मध्ये एक – 15% सम्म
ड्यासबोर्डमा वास्तविक समय रेफरल प्रगति
उत्कृष्ट समाधान र समर्थन
श्री अब्दुलअजीज एलिसा
कार्यकारी निर्देशक, रक्षा मन्त्रालय, साउदी अरेबिया
हामीले रक्षा मन्त्रालयमा PeopleLink InstaVC प्रयोग गर्दै आएका छौं र यो सधैं एक अद्भुत अनुभव हो र यो जडान गर्न धेरै सरल छ। हामीले यसलाई हाम्रा विदेशी विक्रेताहरूसँग प्रत्यक्ष बैठक सञ्चालन गर्न प्रयोग गरेका छौं। हामीले यसअघि पनि Cisco Webex प्रयोग गरिसकेका छौं तर InstaVC को गुणस्तर धेरै उच्च छ र कनेक्टिभिटीको सहजता जहाँ तपाईंको उत्पादन अन्य प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा उच्च छ।
श्री एलेन बेल
अध्यक्ष र संस्थापक, APVRH, मानव संसाधन परामर्श कम्पनी
InstaVC सँग, मसँग सबै भिडियो कन्फरेन्सिङ कार्यक्षमताहरू छन् जुन हामीलाई ठूलो मूल्यमा चाहिन्छ! र विशेष गरी आन्तरिक वा बाह्य भिडियो सम्मेलन सहभागीहरूले कुनै पनि सफ्टवेयर डाउनलोड र स्थापना गर्न आवश्यक पर्दैन।
श्री नुनो फेलिसियो
अध्यक्ष र वेब पार्टनर को संस्थापक
बजारमा एक मात्र व्यावसायिक र शक्तिशाली समाधान जसलाई क्लाइन्ट एप्लिकेसन डाउनलोडको आवश्यकता पर्दैन र पूर्ण रूपमा भरपर्दो InstaVC हो। हामी यसको प्रभावकारिताबाट तुरुन्त विश्वस्त भयौं र पीपललिङ्क पार्टनर बन्न पाउँदा गर्व गर्यौं।
श्री फ्रैंक हद्दाद
क्रिश्चियन बेसनार्ड निर्देशक - फ्रान्स (हेड हन्टर)
InstaVC मार्फत, म मेरा ग्राहकहरू र मेरा उम्मेद्वारहरूसँग धेरै सजिलै र सुरक्षित रूपमा भिडियो सम्मेलनहरू गर्छु। प्रारम्भिक डाउनलोडको लागि आवश्यक पर्दैन, जुन धेरै सराहनीय छ। एक उपयोगी र आर्थिक समाधान, जुन म सिफारिस गर्दछु।
इच्छुक IIT एकेडेमी
Peoplelink InstaVC को प्रयोग गरेर यो उत्कृष्ट अनुभव भएको छ। हामीले IIT एकेडेमीमा 70 विद्यार्थीहरूसँग हाम्रो कक्षा सुरु गर्‍यौं र हामीले हाम्रा सबै संकाय सदस्यहरू र विद्यार्थीहरूसँग इष्टतम उपयोग र प्रयोगमा सजिलो भएको समाधान भेट्टायौं। InstaVC ले हामीलाई बढ्न मद्दत गरेको छ र हामीले एक महिनाभित्रै 70 बाट 140 विद्यार्थीहरूलाई स्तरवृद्धि गर्यौं।
भर्चुअल बैठक प्लेटफर्म
वेब कास्टिङ प्लेटफर्म
भर्चुअल कक्षाकोठा प्लेटफर्म
भिडियो API इन्जिन
भर्चुअल किनमेल प्लेटफर्म
instaVC सम्बद्ध कार्यक्रम
७०% सम्म बचत गर्नुहोस्
तपाईंको अवस्थित बिलिङमा